Ny tsara tarehy-pitiavana amin'ny Swede
Ny tsara tarehy-pitiavana amin’ny Swede
Izahay tamin’ny farany nanomboka nanoratra ho samy hafa, kanefa amin’ny alalan’ny febroary nisy koa be dia be ny asa atao mba hanohy ny fanoratana ho ahy. Efa mazava ho azy fa banga ny taratasy ary naniry ny hahafantatra hoe inona no nitranga teo amin’ny fiainany.
Tsy nanana safidy afa-nandika ny zava-drehetra avy amin’ny teny anglisy ary portiogey izy. Avy eo aho dia nanao vaovao pen PAL izay Belarosiana, fa izy tena aingam-panahy ahy: ny fahaiza-manao fototra kokoa noho ny ahy, ary amin’ny lafiny iray izahay no nanomboka ny fifaninanana: iza no afaka miteny anglisy tsara kokoa? Herintaona taty aoriana, dia niaiky aho fa afaka miteny zavatra tsara kokoa noho ny ankamaroan’izy ireo.
azy, saingy mihevitra aho fa mety hanao toy izany koa
Tamin’ity taona ity aho nihaona tamin’ny maro Swedes, ary nanomboka niteny zavatra misosa tsara. Izaho dia afaka hahazo vatsim-pianarana,»vanin-taona mafana malagasy taranja»amin’ny zavatra Institute sy ny fianarana ny teny bebe amin’ny hafa ny mpianatra nandritra ny roa herinandro. Izany dia mahafinaritra! Rehefa afaka kelikely, ny tena anarana iray ho an-tanàna tonga aho, ary tsy nahy nitsidika ny iray amin’izy ireo, fa ny hafa tantara
← Ao Soeda. Ny zavatra fantatrao momba ny Soeda - lahatsary an-tserasera
Ny lahatsary amin'ny chat-roulette amin'ny ankizivavy →